नेइमार र एम्बाप्पे पिएसजीमै रहने, एउटै लक्ष्य च्याम्पियन्स लिग जिताउने ! – Everest Dainik – News from Nepal
नेइमार र एम्बाप्पे पिएसजीमै रहने, एउटै लक्ष्य च्याम्पियन्स लिग जिताउने !
काठमाडौं, साउन २ । ब्राजिलका स्टार नेइमार र फ्रान्सका युवा स्टार केलियन एमबाप्पे पेरिस सेन्ट जर्मन (पिएसजी) मै रहने भएका छन्। रियल म्याड्रिडले यी दुईलाई क्लब भित्र्याउन गम्भीर चाँसो देखाए पनि पिएसजी ट्रेनिङ सेन्टरका स्पोर्टिङ डाइरेक्टर लुइस फर्नान्डेजले दुबै जना यो सिजन पिएसजीमै रहने बताएका छन् ।
क्रिस्टियानो रोनाल्डोले रियल छाडेर युभेन्ट्स गएपछि उनको विकल्पमा नेइमार र एमबाप्पेलाई भित्राउन रियलले पहल गरेको थियो। तर, दुवै स्टार पिएसजीलाई च्याम्पियन्स लिग जिताउनमा दृढ रहेको फर्नान्डेजले दाबी गरेका छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमका अनुसार एक अन्तर्वार्तामा फर्नान्डेजले नेइमारले पिएसजी रहने निर्णय गरेको बताएका हुन्। फर्नान्डोजका अनुसार नेइमार सफलता चाहने व्यक्ति भएकाले विश्व कपमा ब्राजिलले व्यहोरेको हार पिएसजीलाई उपाधि दिलाएर मेटाउन चाहन्छन्।
एमबाप्पे पनि यही रहेर पिएसजीलाई च्याम्पियन्स लिग जिताउने चाहना रहेको उनले बताए। पिएसजीले गत सिजन नेइमारलाई बार्सिलोनाबाट विश्व कीर्तिमानी रकम २ सय २२ मिलियन युरो र १९ वर्षे फ्रेन्च स्टार नेयमारलाई मोनाकोबाट १ सय ८० मिलियन युरोमा भित्र्याएको हो। -एजेन्सी
ट्याग्स: Neymar, नेइमार, नेइमार र एम्बाप्पे, युवा स्टार केलियन एमबाप्पे